ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): Miss Universe Campaign
ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့မှာ ကျင်းပမည့် Now How အလှမယ်ပြိုင်ပွဲကို Miss Universe 2005 Natalie Glebova က မကြာမီကမှ သူမနှင့်လက်ထပ်လိုက်သော ထိုင်းလူမျိုး တင်းနစ်စ်သမား Paradorn Srichaphan နှင့်အတူ သွားရောက်လည်ပတ်မည်ဖြစ်ပြီး သူမကိုယ်တိုင်က ထိုအလှမယ်ပြိုင်ပွဲအတွက် အကဲဖြတ်ဒိုင်လူကြီးအဖြစ် သွားရောက်ပါဝင်မည်ဆိုသည့် သတင်းများ ထွက်ရှိလာပါတယ် ။ Miss Universe 2005 Natalie Glebova ရဲ့ ခရီးစဉ်က စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ ယုတ်မာမှုကို လမ်းကြောင်းလွှဲပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားနိုင်သလို ၊ စစ်အာဏာရှင်ကို ထောက်ခံမဲပေးလိုက်သလို အခြေအနေဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ အားလုံးက The Miss Universe Organization, MissUPR@missuniverse.com ကို မေးလ်ပို့ပြီး ဒီခရီးစဉ်ကို မထောက်ခံကြောင်း ၊ မသွားသင့်ကြောင်း ပြောရပါ့မယ်။ မျိုးချစ်စိတ် အစစ်အမှန်ရှိတဲ့ မြန်မာပြည်သူအားလုံး ကျေးဇူးပြုပြီး မိမိရဲ့ ပါစင်နယ်မေးလ်အကောင့်ကနေ ဒီမေးလ်ကို ကော်ပီကူးပြီး ပို့ပေးကြပါ။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ရေးပြီး ပို့မယ်ဆိုလည်း ရပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း သေသေချာချာ ပို့ပြီးပါပြီ။ Fax နဲ့ ပို့ချင်သူများလည်း Fax သုံးပြီး ပို့လို့ရပါတယ်။ `မဖြစ်လာနိုင်ပါဘူး´ဆိုပြီး ထိုင်နေတာထက် မိမိလုပ်နိုင်တာ ၊ လုပ်သင့်တာကို တကယ်လုပ်ဆောင်ဖို့က အဓိကအရေးကြီးပါတယ် ။
1370 Ave. of the Americas, 16th Floor New York,
(212) 315-5378 (fax)
BeingaBurmese, I strongly protest the intention of Miss Universe 2005 Natalie Glebova to go to Burma on December 16.
We learned that she has planed to perform asajudge inaBeauty Contest held in the country.
We strongly protest her plan and her intention.
By going there, she will misrepresent herself asaformer Miss Universe who is supposed to represent the world population and to promote peace.
Her visit will approve the acts of Burmese military junta killing innocent monks and street protesters in the country in September this year. Their brutal acts have been strongly deplored by the United Nations Security Council in October 2007.
Accordingly, we would like to urge you to seriously reconsider for revoking her plan to go there.
This world hopes that former Miss Universe represents peace and not world's notorious dictators.
Why is this beauty queen looks like an american woman? is she thai or american or mixed?
the boy looks like Thai but she looks so different, so vain, so stupid. Burmese are copying Thai style anyway.